ဟော့ကင်း၏အယူအဆများ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ကွန်မြူနစ် လားလားမှမဖြစ်ပါ —
Posted on March 14, 2014 by chitnge
သိပ္ပံပညာရှင် ဟော့ကင်းသည် ဟိုက်ဇင်ဘတ်၏ မသေချာခြင်း နိယာမကို အသေးစိတ် ဖော်ပြရာ၌
အိုင်းစတိုင်း၏ အထွေထွေနှိုင်းရ သီအိုရီနှင့် ကွာဟနေကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
(This uncertainty principle of Heisenberg showed that one could not measure the state ofasystem exactly, so one could not predict the probabilities of different outcomes.)
ဟိုက်ဇင်ဘတ်၏ မသေချာခြင်း နိယာမအရ
ဖြစ်တန်ရာခြေဆိုင်ရာ ကြိုတင်ပြောဟောချက်များဟာ မတိကျနိုင်ဟူသော အဖြေကိုထုတ်ခဲ့သည်။
(It was this element of chance, or randomness, that so disturbed Einstein.)
ပညာရှင်ကြီး အိုင်းစတိုင်းအား စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေသော အရာသည် ဤမသေချာခြင်း သဘာဝပင် ဖြစ်သည်။
(He refused to believe that physical laws should not makeadefinite, unambiguous prediction for what would happen.)
အိုင်းစတိုင်းကတော့မူ သေချာတိကျသော ကြိုတင်ပြောဟောချက်တစ်ရပ် မဖြစ်မြောက်နိုင်ဟု ယူဆသော အယူအဆအား ငြင်းဖျက်ခဲ့သည်။
(But however one expresses it, all the evidence is that the quantum phenomenon and the uncertainty principle are unavoidable and that they occur in every branch of physics.)
အိုင်းစတိုင်း လက်မခံနိုင်သော်လည်း မသေချာခြင်းနိယာမ ကွမ်တမ်သဘာဝသည် ရူပဗေဒဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု ဌာနခွဲတိုင်း၌ အဖြစ်မှန်အဖြစ်လက်တွေ့ တွေ့နေခဲ့ရသည်။ အိုင်းစတိုင်း သီအိုရီသည် လက်တွေ့ ထွက်ပေါ်လာသော မသေချာမှုနိယာမနှင့် ညှိနှိုင်းရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် အိုင်းစတိုင်း၏ သီအိုရီသည် အစဉ်အလာသီအိုရီ အဖြစ်နှင့်သာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။
ဤနေရာ၌ အိုင်းစတိုင်း၏ အယူအဆသည် တရားသေဆန်သောဘက်သို့ တိမ်းညွှတ်နေကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သည်။
(Part of Einstein’s problems with quantum mechanics and the uncertainty principle arose from the fact that he used the ordinary, common-sense notion thatasystem hasadefinite history.)
ထို့ကြောင့် ဟော့ကင်းက စနစ်တစ်ခုဟာ တိကျသေချာသော သမိုင်းအစဉ်အလာရှိသည်ဟု ယူဆခဲ့သော သာမညနေ့စဉ်သုံး အယူအဆတစ်ခုကို အိုင်းစတိုင်းက ဆွဲကိုင်ခဲ့သောကြောင့် (Quantum mechanics) ၏ မသေချာခြင်းနိယာမကို လက်မခံနိုင်ခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ဟော့ကင်းက သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ဤသိုဖြင့် ဟော့ကင်းသည် အိုင်းစတိုင်း၏ အယူအဆများအား စနစ်တကျ လက်တွေ့ကျကျ ဝေဖန် စိစစ်မှုများ ပြုလာခဲ့ဖူးကြောင်း ဟော့ကင်း၏ အယူအဆ သမိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများနှင့် သိသာကြောင်း တင်ပြရပါသည်။
ဤအယူအဆများကို (Black Holes and Baby Universes) စာစုများ၌ အထင်အရှား တွေ့နိုင်ပါသည်။
Tags: Black Holes, ဟော့ကင်း
This entry was posted in Articles and tagged Black Holes, ဟော့ကင်း. Bookmark the permalink.